Frantsay saika hanondrana volamena | 102 KARA
Frantsay saika hanondrana volamena
Maromaro ny tera-tany frantsay tato ho ato no tra-tehaky ny mpitandro filamianana tamin’ny resaka trafika.
Tamin’ny faran’ny herinandro teo iny indray, dia frantsay tera-tany frantsay avy any Inde no tratra teny IVATO, saika hanondrana an-tsokosoko vongam-bolamena roa be izao, ary milanja 300 grama.
Asa na mbola tsy zatr’ady amin’itony trafika toy itony izy na ahoana, fa dia nentiny tany am-paosiny tsotr’izao ilay vongam-bolamena roa. Efa hiondrana ny fiaramanidina izy vao tra-tehaka teo amin’ilay milina misari-vavahady, antsoina amin’ny teny frantsay hoe portique. Rehefa nosavain’ny tompon’andrikitry ny fadin-tseranana, dia indreo fa nivandravandra sy niharihary toy ny kary an’efitra ,ny nafenina.
Fiaramanidin’ny sampam-pitaterana Air Mauritus hizotra ho any Bombay izy ity, ary ilay ranamana saika hanondrana an-tsokoosoko ny volamena kosa dia tokony hidina ao Maurice.
Somary gaga ihany ireto mpiasan’ny fadin-tseranana teny IVATO satria ny fahita matettika dia afenin’ny mpanao asa ratsy any anatin’ny valiziny ny raharaha tahaka izao. Ny an’ity tratra ity kosa anefa dia nentiny nanaraka azy tany am-paosiny, asa izay tena mba tao an’eritreriny tamin’izany…
Mpiara-miasa samy teratany sovietika no nivadim-pitokisana. Nanorina orinasa mpitrandraka volamena sy vato izay nomen’izy ireo anarana hoe “ ALPHA MADAGASCAR, ALPHA KATSEPY” ireto teratany vahiny ireto. Roa izy ireo no nifanaraka tamin’izany ka i David no tombom-bola ary Vladmir kosa no hitantana izany teto Madagasikara ary nifanaiky fa hisy tombony ny Orinasa.
4 août 2013 - 6 h 17 min Divers 1345 vues